Solomaso vaovao miovaova vaovao avy amin'ny Microsoft | Avy amin'ny Linux
Solomaso vaovao miovaova vaovao avy amin'i Microsoft
Na dia efa fantatra aza izany ny teknolojia de zava-misy Nampitomboina dia eo anelanelantsika ary ireo orinasa samihafa dia efa mampiasa mitovy amin'ny fampiharana sy singa hafa, Nanamboatra solomaso Augmented Reality i Microsoft ary omeko patanty ny endriny hiditra amin'ny tsena.
Ny asan'ny Solomaso tena izy dia ny manome fampahalalana mivantana ho toy ny hetsika na hetsika mivantana hita. Raha mijery ny Tilikambo Eiffel miaraka amin'ny solomaso isika, dia hanome antsika fampahalalana momba ny taona nananganana azy sy angona mitovy amin'izany, mba hanomezana ohatra iray fotsiny.
Ny voalohany nanolotra ny iray amin'ireto vera ireto dia Google ampiasaina amin'ny vokariny, fa i Redmond kosa nampihatra endrika hafa.
Ny solomaso an'ny Augmented Reality an'ny Microsoft Natao hampiasaina amin'ny fotoana manokana fotsiny izy ireo toy ny hetsika amin'ny fahitalavitra na kaonseritra, izay hanomezana lahatsoratra sy feo fampahalalana raha ilaina izany.
Mandritra ny fotoana Microsoft dia nanao patanty ny solomaso Augmented RealityNy marina dia mbola tsy misy ny fandehanana mivaingana, saingy heverina fa efa hiasa amin'ilay prototype izy ireo.
Ny hany sisa tavela dia ny miandry ary hijery hoe iza amin'ireo orinasa nisoratra anarana tamin'ity vaovao ity teknolojia hahomby kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Solomaso vaovao miovaova vaovao avy amin'i Microsoft
Fehezo amin'ny alalàn'ny SSH (terminal) ny solo-sainao
ITunes 11 vaovao an'ny Apple